စာစီစာရိုက်ဝေါဟာရ- Apex မှ Swash နှင့် Gadzook ကြားတွင်... ဖောင့်များအကြောင်း သိလိုသမျှ | Martech Zone
စာစီစာရိုက်ဝေါဟာရ- Apex မှ Swash နှင့် Gadzook ကြားတွင်... ဖောင့်များအကြောင်း သိလိုသမျှ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 16, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 16, 2022 Douglas Karr
ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိက ဝါသနာက ပုံဆွဲခြင်းပါ။ အထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းက ပုံဆွဲသင်တန်း နှစ်နှစ်လောက်တောင် တက်ခဲ့ပြီး သဘောကျတယ်။ ဂရပ်ဖစ်၊ Illustrator၊ သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့် အခြားသော ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ သို့မဟုတ် ပို့စ်များ အဘယ်ကြောင့် မကြာခဏ ရှိသည်ကို ၎င်းသည် ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ ယနေ့တွင် ၎င်းသည် စာစီစာရိုက်နှင့် ဖောင့်များ၏ ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
ဖောင့်များနှင့် စာစီစာရိုက်သမိုင်းကို ခြေတစ်လှမ်းပြန်လှမ်းကြည့်လိုပါက၊ ဤသည် Letterpress ၏ ပျောက်ဆုံးသွားသော အနုပညာဆိုင်ရာ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်နှင့်အွန်လိုင်းတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်၊ ဒီဇိုင်းကောင်းနှင့် ဖောင့်များသည် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၏တင်ပြမှုတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပြီး စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်၏မျက်စိကောင်းရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ တကယ်တော့…
စာသား၏အသွင်အပြင်သည် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတစ်ခုသာမကဘဲ မတူညီသောဖောင့်များ၏အသွင်အပြင်သည် ကြည့်ရှုသူအပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဖောင့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပိုမိုစိတ်ခံစားမှုရှိသောဖောင့် သို့မဟုတ် အားကောင်းသည့်ဖောင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးသည် ကြည့်ရှုသူကို ခံစားရစေပြီး အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဆီသို့ ကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်နိုင်သည်။
ဖောင့်များ၏ စွမ်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများ ရှိနေပါသလား။ သမိုင်းကြောင်းကို ပေးစွမ်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုတောင် ရှိပါသေးတယ်။ fonts နဲ့ war ရိုက်ပါ။ YouTube တွင် ရနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Helvetica (iTunes နှင့် Amazon တို့တွင်) ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရန်သေချာစေပါ။
ဖောင့်များ၏ ဒီဇိုင်းတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အသေးစိတ်နှင့် လက်ရာမြောက်သည်။ စာစီစာရိုက်များ. ဒါကတော့ စာစီစာရိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပါ… ဖောင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ သင့်စာတိုပေးပို့မှုမှာ ဖောင့်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို လူတော်တော်များများ မသိကြပါဘူး။
မှတ်ချက်တစ်ခု - ဤသည်မှာဖောင့်တစ်ခု၏ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုရှင်းပြရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုတွင်သူတို့အသုံးပြုသောဖောင့်များကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နှင့်အတူမျှဝေချင်တယ်! အဲဒီလိုနည်းနဲ့မင်းတို့ဒီဇိုင်နာကိုအက္ခရာတွေအကုန်လုံးပိုလိုချင်တယ်ဆိုတာရှင်းပြချင်ရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောပြီးပြောနိုင်တယ်။
စာစီစာရိုက်ခြင်းသည်ငါ့အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ထူးခြား။ စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြနိုင်သည့်ဖောင့်များကိုတီထွင်ရန်ဒီဇိုင်နာများ၏စွမ်းရည်သည်မယုံနိုင်စရာပင်။ စာတစ်စောင်ကဘာလဲ။ Diane ကယ်လီ Nuguid စာစီစာရိုက်စနစ်တွင် စာလုံးတစ်ခု၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေရန်အတွက် ဤ infographic ကို စုစည်းပါ။
ဒါပေမယ့် စာစီစာရိုက်အနုပညာမှာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဤသည်မှာ ဖောင့်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသည့် အသွင်အပြင်နှင့် လက္ခဏာအားလုံးဖြစ်သည်။ စာစီစာရိုက်များ.
aperture - ပွင့်လင်းကောင်တာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပူးတွဲအနုတ်လက္ခဏာအာကာသ။
အထွတ် - အက္ခရာနှစ်လုံးနှင့်တွေ့သည့်အက္ခရာပုံစံ၏အပေါ်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအမှတ်၊ စသည်တို့ကို, rounded, ချွန်ထက် / ချွန်, ပြားချပ်ချပ် / တုံးနိုင်ပါသည်
အဓိကအား၏ Arc - ပင်စည်နှင့်အဆက်မပြတ်သောကွေးသောလေဖြတ်ခြင်း။
တက် - စာလုံး၏အမြင့်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတက်သောဖောင့်တစ်ပိုင်း။
ဘား - အက္ခရာ A, H, R, e, နှင့်fရှိအလျားလိုက်လေဖြတ်ခြင်း။
baseline - အက္ခရာများ၏အခြေစိုက်စခန်း၏အလျားလိုက် alignment ကို။
ခွက် - ကောင်တာတစ်ခုဖန်တီးသောကွေးသောလေဖြတ်။
ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် - ဇာတ်ကောင်တစ်ခု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝပါ ၀ င်သောနေရာ။
လေဖြတ်ခြင်း - စာလုံး၏ပင်မကို ဖြတ်၍ တိုးချဲ့သောမျဉ်းကြောင်း။
ဆင်းသက် - တခါတရံအခြေခံမှအောက်သို့ဆင်းသောဇာတ်ကောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ag, j, p, q, y နှင့်တစ်ခါတစ်ရံ j ။
နား - စာလုံးအသေး၏ထိပ်မှပရောဂျက်ပြုလုပ်သောသေးငယ်သောလေဖြတ် g ။
ခြေလျင် - ပင်စည်၏အစိတ်အပိုင်းသည်အခြေခံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Gadzook - စာလုံးနှစ်လုံးကိုအက္ခရာနှစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အလှဆင်ခြင်း။
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး - လေဖြတ်ခြင်းကိုပင်စည်နှင့်ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ။
ဦးဆောင် - စာသားတစ်ကြောင်း၏အခြေခံအကြားနောက်တစ်ခုသို့အကွာအဝေး။
ခြေထောက် - စာလုံးပုံသဏ္onာန်တို။ ဆင်းသက်လာသောလေဖြတ်ခြင်း။
Ligature ပေါ့ - စာလုံးနှစ်လုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောစာလုံးတစ်လုံးကိုဖွဲ့စည်းရန်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်အလှဆင်။
လိုင်းအရှည် - အစသို့မပြန်မီလိုင်းတွင်မည်မျှအက္ခရာတင်သည်။
loop - စာလုံးအသေး၏အနိမ့်အဘို့ကို။
serif - ဇာတ်ကောင်များ၏အဓိကလေဖြတ်ခြင်းမှချဲ့ထွင်သောစီမံကိန်း။ Sans serif စာသားအရ 'without' Serif ကိုဆိုလိုသည်။ စကားလုံး၏ပုံသဏ္betterာန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်လူများအားစာဖတ်နိုင်အောင် Serif အခြေပြုဖောင့်များကသိရှိကြသည်။
ပခုံး - ဇ, မီတာနှင့် of ၏ကွေးလေဖြတ်။
Swash လုပ်ပါ - letterform ပေါ်တွင်အလှဆင် extension တစ်ခုသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်း။
ပင်စည် - စာလုံးတစ်လုံး၏အဓိကဖြောင့်၊ ဒေါင်လိုက်လေဖြတ်ခြင်း (ဒေါင်လိုက်မရှိသည့်အခါထောင့်ဖြတ်မျဉ်း) ။
လေဖြတ်ခြင်း - အရက်ဆိုင်များ၊ လက်မောင်းများ၊ ပင်မများနှင့်ဖလားများပါ ၀ င်သည့်မျဉ်းဖြောင့်သို့မဟုတ်ကွေးနေသောမျဉ်း။
α€α€°α€α€¬α€›α€―α€¶ - serif မပါသည့်လေဖြတ်ခြင်း၏အဆုံး၊ ပါဝင်ပါသည် ဘောလုံးဆိပ်ကမ်းများ (ပုံသဏ္inာန်၌မြို့ပတ်ရထား) နှင့်အပြီးသတ် (ကွေးသို့မဟုတ်ပုံသဏ္inာန်အတွက် tapered) ။
vertex - နှစ်ခုလေဖြတ်တွေ့ဆုံရန်ဇာတ်ကောင်များ၏အောက်ခြေမှာအမှတ်။
x အမြင့် - ပုံမှန်ဇာတ်ကောင်များ၏အမြင့် (မည်သည့်တက်သည်သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသူများမှအပ)
Janie Kliever ဒုတိယပေးခဲ့သည် Canva များအတွက် infographic အပိုဆောင်းအသေးစိတ်နှင့်အတူ။ တစ်ခုချင်းစီ၏အသေးစိတ်ကျသောအမြင်အတွက်သူတို့၏ဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ် ဤဆောင်းပါးတွင်ပါ။
Tags: အပေါက်အထွတ်ပင်စည်၏ arcလက်တက်ဘောလုံးကွင်းဘားအခြေခံခွက်ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်ဆိုင်ရောင်းခုံရှည်လေဖြတ်ခြင်းဆင်းသက်Diane ကယ်လီ Nuguidနားဖောင့်font အစိတ်အပိုင်းများဖောင့်များခြေမမင်္ဂလာပါJanie Klieverပူးတွဲkerningဦးဆောင်ခြေထောက်မျဉ်းအရှည်ကွင်းဆက်တစ်ဖောင့်၏အစိတ်အပိုင်းများserif မပါဘဲserifပခုံးပင်စည်လေဖြတ်ခြင်းဆွဂိတ်ဝေါဟာရကထာစာစီစာရိုက်typography ဝေါဟာရစာစီစာရိုက်ဝေါဟာရစကားစုx အမြင့်
အဘယ်ကြောင့် Data Cleansing သည် အရေးကြီးပြီး Data သန့်ရှင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို သင်မည်ကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သနည်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန် CMOs အတွက် မော်ဂျူလာ အကြောင်းအရာ မဟာဗျူဟာများ